Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Carlo Ancelotti Child Story Plus Ihe na-emeghi ka ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Carletto'.
Anyị Carlo Ancelotti Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ihe ọmụma banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike njikwa ya mana ole na ole na-ele Carlo Ancelotti's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Carlo Ancelotti nke ụmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Carlo Ancelotti na 10th nke June 1959 na Mr na Mrs Giuseppe Ancelotti bụ ndị ọrụ ugbo Cheese. Ọ tolitere na Reggiolo nke bụ obodo a na-akọ ugbo n'ime cheese nke ugwu Italy.
Obodo bụ famọ bụghị naanị n'ihi na ọ na-egbu achịcha parmesan ma ọ bụ maka ntụrụndụ ụfọdụ nke ụmụ amaala ụwa na onye njikwa aha Carlo Ancelotti.
O nwere mgbe nile, àgwà obi ụtọ ya site na nwata. Carlo Ancelotti ka ọ na-etolite weere nna ya. Nna ya bụ Giuseppe bụ onye na-adị mfe ịnọnyere na n'ụzọ dị ala n'ụwa. O nyere Carlo ezigbo ịzụlite Italian.
Ihe ka ọtụtụ n'ime nwata ya na nna ya na nne ya na nwanne ya na-arụ ọrụ ugbo. Carlo toro na-agbazi onwe ya n'ọrụ siri ike na ịdọ aka ná ntị sitere n'aka ndị mụrụ ya na ndị nkụzi ya.
Ka ọ na-etolite, otu ihe nyere ya nsogbu. Eziokwu ahụ bụ na 'ọrụ ugbo ezughi ezu iji bulie ezinụlọ ya ịda ogbenye'. Nke a mere ka ọ gbanwee mgbanwe n'ọchịchọ ya ikpebi ihe ọ ga - abụ n'ọdịnihu.
Carlo Ancelotti Eziokwu na-enweghị isi - Mkpebi ịbụ onye na - agba bọọlụ:
Site na nwata, ọ malitere inwe ọchịchọ ime ihe ọzọ nke ndụ ya mgbe ọ na-ele nna ya na nne ya anya na-apụ kwa ụbọchị, na-arụ ọrụ ubi ala ubi ha maka obere ụgwọ ọrụ. Nke a mere o ji kpebie ịmalite ọrụ na football.
N'ajụjụ ọnụ, Carlo Ancelotti kwuru; "Football abụghị nanị ọrụ. M tolitere n'ugbo, football bụ ndụ ka mma. " Ọ bụ ụgbọala Ancelotti ka ọ bụrụ ihe ọzọ nke mere ka ọ si n'ugbo ahụ gaa n'òtù ndị ntorobịa Reggiolo, ebe ọhụụ ya Parma ma daa.
N'ihi ya, ọ bụ nrọ nke otu obodo nwoke nke metụrụ eluigwe na football.
Carlo Ancelotti akụkọ nke na - imeghari na ndụ dị iche:
Ọ bụ ihe ijuanya na-eto eto bụ Carlo na-esi n'otu ime obodo na-arụ ọrụ ugbo na-etolite n'oge ọ bụ nwata ruo n'obodo ukwu ahụ na-agwụ ike na-agba chaa chaa. Ọ gbanwere dika ọ ga-eme ọtụtụ ugboro n'ọdịnihu. Carlo hụrụ onwe ya dị ka nwatakịrị bụ onye nwere ike ibi ma na-agba ume football. Ọ bụ onye na-ege ntị na onye na-amụ ihe nke ọma na onye na-amụ ihe bụ onye wepụtara oge ya na-ekiri ma na-amụta site n'aka ndị okenye.
Ancelotti ga - abụ onye 15 na-atụ egwu na-aga na akara ngosi Ịtali, na-enweta Scudetto na Coppa Italia anọ. Rome, na ịbụ akụkụ nke otu Milan ahụ, nke Arrigo Sacchi jisiri ike - otu ikpeazụ ga - emeri iko abụọ nke European.
Nwa okorobịa Carlo bụ nnukwu kpakpando na AC Milan n'oge ahụ. Onye na-eme egwuregwu na-alụ ọgụ maka Parma, AS Roma na AC Milan, o nyeere Roma aka inweta 1983 Serie A aha na iko Italian anọ tupu ya abanye AC Milan na 1986 ebe ọ gbakwunyere asọmpi abụọ ọzọ, yana mmeri European Cup na azụ. na 1989 na 1990.
Na nke anọ, Ancelotti malitere ịkụzi. Ọ na-akwado nkwalite na Serie A na mpaghara ya Reggiana, na-agbago Juventus wee gaa AC Milan, site na ebe ọ ga-aga Abramovich's Chelsea tupu ọ banye PSG nke Al Khelaifi. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Carlo Ancelotti Hụrụ Ndụ Ndụ:
Ị zutere ezigbo enyi nwanyị bụ Real Madrid Carlo Ancelotti? ikekwe mba, ọ bụghị Luisa, ya na nwunye ya ma ọ bụghị Marine Cretu ma nke ahụ bụ enyi ya nwanyị mbụ.
Ancelotti na-akpachapụrụ anya ugbu a dị ka Mariann Barrena McClay. N'okpuru ebe a bụ foto mara mma nke nwanyị Canada dị ọkụ.
Ọ hụrụ Carlo n'anya nke ukwuu n'ihi na ọ na-atọ ụtọ ịnọnyere. N'okpuru ebe a bụ foto nke ha na-aga Oktoberfest (Oktoberfest bụ Volksfest kasị ukwuu n'ụwa. Na-eme kwa afọ na Munich, Bavaria, Germany).
A mụrụ Mariann na Vancouver, Canada site na María Concepción Gutiérrez na Antonio Barrena. Ọ gụrụ ezigbo akwụkwọ.
Ọ na-ejide MBA na Marketing site na Thunderbird School of Global Marketing, MBA na azụmahịa ụwa na PhD, na Ego si Azụmaahịa Cass. Ọ na - ejide BBA na nchịkwa azụmahịa site na Simon Fraser Mahadum.
Ọ bụbu onye ndụmọdụ na Barclays Bank na London. N'oge ahụ, na 2011, ọ zutere Carlo Ancelotti na-arụ ọrụ na Chelsea. Ancelotti na Barrena McClay lụrụ na Vancouver na July 2014.
A! Ha na-enwe obi ụtọ dị ukwuu ma anyị amaghị onye nwa ya na-ejide n'oge ahụ. Ọ bụ alụmdi na nwunye ha nke abụọ maka ha abụọ ma Mariann nwere nwatakịrị nwanyị mara mma, bụ Chloe McClay.
Tupu ya, Carlo lụrụ nwunye ya bụ Luisa ruo ihe karịrị afọ iri abụọ. Na-elele foto ha n'okpuru, otu ihe bụ ihe nkịtị. Carlo nwere anya maka ụmụ nwanyị mara mma.
Mgbe ya na Luisa kewara, ọ na-akpọ gal Marina Cretu nke dị afọ 13 karịa ya. Ancelotti na x-nwunye ya Luisa Gibellini nwere abụọ ụmụ Davide, onye bụ onye nkuzi ahụike Real Madrid.
Dị nnọọ ka Harry Redknapp, Steve Bruce na Zidine Zidane enyewo ụmụ ha nwoke ohere na football, Carlo Ancelotti emewokwa otu ihe ahụ. Ọ họpụtara nwa ya na-enweghị uche, Davide dị ka onye inyeaka nchịkwa Bayern Munich mgbe ọ nọ na Allianz Arena.
Nwa nke Danilo da Silva Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ihe Ozo
Carlo Ancelotti nwere nwa nwanyị aha ya bụ Katia site na nwunye ya. N'okpuru ebe a bụ foto nke lookalike Katia na nna ya.
Katia bụ nwa mbụ na nwa ya nwanyị, a mụrụ na 18th nke April 1984. Ọ lụrụ na 2014 ya na onye òtù ọlụlụ ya, Mino Fulco.
Carlo Ancelotti Ndụ Nke Onwe:
Carlo nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike nke Carlo Ancelotti: Ọ dị nwayọọ, na-ahụ n'anya, na-agbanwe agbanwe, nwee ike ịmụta ngwa ngwa ma gbanwee echiche
Ike Carlo Ancelotti: O nwere ike na-atụ ụjọ, na-ekwekọghị ekwekọ na enweghi uche.
Ihe Carlo Ancelotti nwere mmasị: Egwú, akwụkwọ, magazin, mkparịta ụka na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla ma nwee njem dị mkpirikpi ọ bụla n'obodo ọ bụla ma ọ bụ obodo ọ na-eleta.
Ihe Carlo Ancelotti achọghị: N'ịbụ onye naanị ya, ịbụ onye a na-ejigide, ikwughachi ugboro ugboro.
Karịsịa, ụwa ya masịrị Carlo nke ukwuu. Ọ na-echekarị na enweghi oge iji nweta ihe niile ọ chọrọ ịhụ.
Carlo Ancelotti Sm Smụ Sịga:
Otu ihe nke na-esiri ike bụ na ozugbo ọ kwụbara akpụkpọ ụkwụ ya dị ka onye na-egwu egwu, Carlo malitere ị smokingụ sịga nke na-aga n'ihu na ndụ ya. Gị, ọ na-azọrọ na ọ bụ oge ụfọdụ.
Mgbe ajụrụ gị nso nso a, "Carletto" (dika ndi ezinulo ya na akpo ya site na ihunanya) o kwusiri ike na "Ọ na-agbalị ịkwụsị".
Carlo Ancelotti Eziokwu Eziokwu - nkuanya aka ekpe ya:
Mgbe Vespa dara mgbe ọ dị afọ iri na ụma, nkuanya aka ekpe nke Carlo hapụrụ ya kpamkpam. Mgbe ụfọdụ, ọ na-eji nkuanya aka nri ya mee ihe iji mee ka ọ pụta ìhè.
Ndụ Carlo Ancelotti:
Dị ka e kwuru na mbụ, Carlo si n'ezinụlọ dara ogbenye na-ezighị ezi tupu a kwụọ ụgwọ ịgba chaa chaa.
N'oge ikpeazụ ya na Chelsea, Ancelotti aghaghị ịlaghachi Italytali mgbe niile iji gaa leta nna ya dị afọ 87 bụ onye na-arịa ọrịa shuga na nsogbu ndị ọzọ.
N'okwu ahụ, ọ sịrị, “Enweghị m nsogbu ijikwa otu otu maka nke a. O siri ike, mmetụta uche, mgbe ọ bụ nna gị… mana nke a bụ ndụ. Aghaghị m ime ike m niile iji nọrọ ya nso, mana nke a bụ ndụ. ” Nna ya nwụrụ na 29 Septemba 2010, agadi 87. Carlo Ancelotti nwere nwanne nwanyị aha ya bụ Angela Ancelotti.
Carlo Ancelotti akụkọ nke na - enweghị ihe ịga nke ọma Akụkọ:
Carlo Ancelotti nwere 5 UEFA Champions League gold medals.
Ndị mbụ ya abụọ bịara mgbe ọ bụ onye egwuregwu na AC Milan, na-emeri asọmpi ahụ wee kpọọ okpukpu abụọ nke azụ Europe na azụ azụ na 1989 na 1990.
Dị ka onye njikwa Ancelotti meriri Champions League ugboro abụọ na Milan na 2003 na 2007, na Real Madrid ọzọ na afọ gara aga.
Na 1984 (ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ahịrị n'ụbọchị ahụ) Ancelotti na AS Roma bụ ndị na-akwụ ụgwọ ntaramahụhụ site na mmeri mmeri ahụ, mana ha mechara merie 4-2 na ntụpọ na Liverpool mgbe njedebe ikpeazụ 1-1.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Carlo Ancelotti Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Skwụ Slopes Tours- Tanzania
Otu n'ime njikwa kacha mma n'oge niile na Euro!